Izindaba Umphakathi, Sezulu
Ubani phakathi kwethu akafuni ukuya emazweni ezingakaze zifinyelelwe? Ngiyakuthanda ukuhamba, ngamunye wethu egazini. Phakathi naleso sikhathi ikakhulukazi uyajabula ukuya climes ukufudumala lapho ezweni coldly. Kodwa kungakhathaliseki ukuthi hhayi abanjwe hhayi ukusuka kwelinye ukuwa kwenye?
Kulesi sihloko sizoxoxa yini noma cha ukuya eGibhithe ngo-Okthoba. Isimo sezulu kuleli zwe wehlukile izinga lokushisa evamile nesimo sezulu sendawo iqembu lethu laziwe kakhudlwana.
Ngokwengxenye enkulu, Egypt - kuba ehlane. Lapho shazi nokujikijela - nomaphi kwezihlabathi engapheli, izindunduma .. wamaphesenti endaweni ingqikithi yalesi isimo ezine kuphela ngayinye banombono ohlukile, kodwa lokho! Okunethezeka Amahhotela kanye Cottages umnotho kwekilasi, izakhiwo okusezingeni eliphezulu kanye Villas yangasese, amachibi okubhukuda, yokufakelwa kanye eyenziwe izakhiwo yezakhiwo. Abakhi uye wazama okusemandleni abo futhi wenza ingxenye encane isimo sabo ku izivakashi eMecca. Eqinisweni, izivakashi eziningi akanandaba imibhoshongo ngisho millenary ukuthi ukuheha abavakashi nabahloli bamazwe - ngabo kukhona injabulo ngaphezu kuka yokuthamela ilanga mnene ngakho abalale loungers okuntofontofo.
Vakashela izwe nganoma yisiphi isikhathi sonyaka - Egypt uthembisa izivakashi a zethusi tan nolwandle efudumele ngoJanuwari, isimo sezulu sasisihle khona umuntu ngoMashi, ukushisa kakhulu, kodwa ngamanani aphansi ngo-July. Futhi silindele Egypt ngo-Okthoba, isimo sezulu ngalesi sikhathi uphelele nokokuzilibazisa kokubili abadala kanye nezingane.
Egypt ngezikhathi ezahlukahlukene onyakeni
EGibhithe, akukho ebusika ngomqondo yendabuko, ngakho abaningi bakithi uncamela vakashela leli lizwe ebusika.
Ilanga ngalesi sikhathi akuyona njengoba nolaka njengoba ehlobo, ulwandle afudumele (18-20 degrees Celsius), futhi azijabulise otyha kukhona engaqhathaniswa kakhulu isizini isiqongo eCrimea. Spring iza, futhi izinga lokushisa likhuphuka ukuze 30-34 degrees. Spring Ngesikhathi esihle ukuze holide eGibhithe. Izivakashi uqiniseka ukubuyela ekhaya bronzed waphumula, ngoba imvume ngalesi sikhathi ayabiza kunamawashi kwamanye zonyaka.
Summer eGibhithe okuthena amandla ashisayo. Amazinga okushisa ongafinyelela 40-45 degrees, amanzi lifudumeza kuze kufinyelele 29-34 degrees. Ngalesi sikhathi hambo contraindicated futhi batadishe ezweni ongaqondakali, njengoba kungaba kuphela siphumele ngokwakha isimo sabantu abanempilo futhi aqine. Ngakolunye uhlangothi, ngalesi sikhathi kungaba basindiswe - amahhotela eziningi usike amanani kufike ku-50% ngaphandle kwentengo yasekuqaleni ukuheha izivakashi. Futhi iyini ekwindla? Kuyini lokhu ezweni ngo-September, lokho iGibhithe ngo-Okthoba? Isimo sezulu ngalesi sikhathi kudingeka siyinake ngokukhethekile. Uma uphatha ukuba ngithathe ikhefu emsebenzini phakathi nalesi sikhathi, qiniseka ukuthi uvakashela leli zwe.
Isimo sezulu eGibhithe ekwindla
Autumn kuba nesikhathi esimnandi kakhulu uphumule. Ngalesi sikhathi sonyaka, wena ngeke nje hhayi kwi freezer, kodwa futhi ungaba nesikhathi esihle futhi ezithakazelisayo ezindongeni ehhotela, futhi hambo. Uma umuntu, ohamba phambili yokuphila asebenzayo, futhi ungathandi ukushisa, kuba ekwindla ekuhambeni eGibhithe. Nokho, kukhona eyodwa ethile kulesi sikhathi sonyaka kwezivakashi.
Ngo September no-Okthoba kungenzeka kwezulu, okuyinto kungenzeki ehlobo. Kodwa ngisho noma wena "lucky" ukubamba imvula, ngeke bude lide kakhulu.
Isimo sezulu emadolobheni ahlukene laseGibhithe
Uma uthatha izinkomba isilinganiso ngo-Okthoba ngoba eminyakeni embalwa edlule, bayoba ngalokhu okulandelayo - ntambama lokushisa air ifinyelela degrees 28-30 ebusuku udedela ukuze 22-24. Amazinga amanzi ngo-Okthoba imayelana 25-26 degrees. Lezi idatha ejwayelekile zokungcebeleka ezinkulu - Sharm el-Sheikh, Nuweiba, Dahab nezinye izindawo ezidumile olusempumalanga zidlule iNhlonhlo YaseSinayi.
Sinjani simo selitulu ku-west coast oLwandle Olubomvu? Lo magazini futhi olufanele labo selibuthile Egypt. Hurghada, isimo sezulu ngo-Okthoba, okuvamise kuthe ukuphola kancane, ephelele i iholide ekwindla. Ngakho, ngo-emini Guna, Hurghada Safaga noma kungenzeka kuze kube degrees 28, amanzi kusifudumeza 20-23 degrees. Kodwa wena hhayi nganoma iyiphi indlela ngeke iqhwa njengoba ubusuku nemini kule ngxenye yezwe ovunguzayo efudumele. Yini enye engingabuye ezinhle Egypt ngo-Okthoba? Isimo sezulu akuyona iyashintsha ngakho njengoba ngo-November, kanye uma kwenzeka obala imvula, ngeke kube iphelela eside futhi ngokushesha. izinsuku ezingamashumi amabili nesithupha eGibhithe, ilanga liyashisa kule nyanga.
inqubomgomo Inani ngo-Okthoba
Yiqiniso, labo abahamba sokuphumula, ngaso sonke isikhathi ilukuluku mayelana ohlangothini zezimali mayelana nodaba. Yini Egypt ngo-Okthoba? Isimo sezulu, intengo - wukuthi izithakazelo izivakashi kwasekuqaleni. Nge sezulu siye waqonda, manje sihlaziya intengo ngalesi sikhathi.
Ngokushesha kuyafaneleka ukuthi isimo sezulu kanye intengo ukuvakasha kuhlobene. Uma ihlobo eGibhithe ungakwazi ukujabulela lonke abantu namandla emoyeni, futhi amanani aphansi ukwedlula ezingeni evamile. Autumn ejabulisa izivakashi a sezulu emnandi sokuzilibazisa, ngakho abanikazi zehhotela ekujaheni ukujabulisa amakhasimende izaphulelo.
Ekuqaleni kuka-Okthoba, izindleko zokuhamba kulowo ngethikithi nokubuya ngeviki kungadla $ 500. Kodwa eduze ekupheleni kuka-October (njengoba eya ngaphezulu sezulu ezimanzi), ephansi intengo kungenzeka. Yiqiniso, okuningi kuncike isiqondiso sakhe esikhethiwe, futhi izimo kule ndawo.
Kuyini kwasuka isikhwishikhwishi esinamandla? A isishingishane ezishisayo ekuthunyelweni eNingizimu Nenkabazwe. Izishingishane futhi anticyclones - izici amagama
Indian ehlobo - lokhu kungukuqala ekwindla
2015 d kungenzeka unyaka ezishisa emhlabeni emlandweni
Isimo sezulu e Goa. Isimo sezulu nge Inyanga
Izinga lokushisa ngo-Ephreli eGibhithe. Amaholide ngo-Ephreli eGibhithe